Off Stage Average 2.7 / 5 avy amin'ny 3
N / A, manana fomba fijery 1.3K
Mbola eo an-tsehatra indray i PAZE (vondrona sampy faha-1 any Korea) hanao fampisehoana amin'ny lanonana fankalazana isan-taona. Tampoka teo, nandritra ny seho an-tsehatra, nianjera teny ambony lampihazo ilay mpandihy planafara ka naratra kitrokely. Noho io ratra io dia nofoanana ny fandaharam-potoanan'ny PAZE iray manontolo, ao anatin'izany ny fitsidihana tafaverina amin'ny tapany voalohan'ny taona! Amin'ny ezaka hitazonana ny mpankafy afa-po amin'ny faharetan'ny fampiatoana ny hetsika, ny masoivoho dia manapa-kevitra amin'ny tarika misy olona roa. Izy io dia misy an'i Jae-hyuk, mpiangaly rap malaza PAZE ary ny mpitarika ny vondrona Hae-eun. Hae-eun misalasala noho ny fanerena tampoka fa ahoana kosa no tsy itanganan'i Jae-hyuk mihitsy ?! Fa kosa, Jae-hyuk dia mihetsika toy ny hoe niandry ny fananganana an'ity Duo ity izy! Hae-eun mahatsapa fa hiova ny fifandraisany amin'i Jae-hyuk amin'ny alàlan'ity fiaraha-miasa ity. Taorian'ny seho manokana natombok'izy ireo tamin'ny kickoff dia manomboka tantaram-pitiavana mahafinaritra an'ny sampy roa…
Chapter 26 Septambra 8, 2021
Chapter 25 Septambra 8, 2021
Chapter 16 Septambra 8, 2021